Nakuba imoto Grand Vitara Suzuki lenkampani Japanese wanquma ukuba kuthiwe umuntu crossover compact, layo impahla off-road kude labo encintisana kakhulu. A multi-mode amane-wheel drive powertrain lokhu imoto unekhono ukuvimba i umehluko isikhungo kanye downshift, okuyinto ezingavamile, hhayi kuphela manje crossover, kodwa futhi ku izimoto, okungokwendlela Suv.
Imodeli Grand Vitara waqala yokukhiqiza ngo-1997 izinguqulo ezintathu eziyisisekelo: i-ngendlu ezinhlanu, ngendlu side futhi mfushane emithathu umnyango. Ngo emakethe yasekhaya Japanese lezi zimoto abizwa ngokuthi Suzuki Escudo. Emlandweni ezimbili izizukulwane imoto washintsha (ngowokuqala - ngo-1997, kwesibili - ne ka 2005), futhi kwakukhona ukuba abanye restyling, owokugcina okwenzeka zamanje 2013. Empeleni, "igama ukushaya" imodeli crossover Grand Vitara waqala uma inguqulo emithathu umnyango kwesizukulwane sama imoto yesibili isuswe kanye aphansi igiya isikhungo umehluko yokuvala.
Uhlobo Suzuki Grand Vitara 2013. kuqhathaniswa ezazingaphambi kwayo ishintshile kancane. Izinguquko abathintekayo ulwelwesi we Izinsimbi kurediyetha, okuyinto ilungisiwe kulekelelwa-chrome faka ezansi. Ushintshe i yokukhanya izibani ukuthi avumelana ijamo aphansi "umlomo" air eyanele. Kubukeka umxhwele isondo ukujula nemengamo ezivumela ukufaka akwazi ukugcina nge nesishiyagalombili amayintshi ububanzi.
Ukushayela ukusebenza Suv Suzuki Grand Vitara 2013. emigwaqeni kanzima Kwadlula kukhona nkomoni futhi uvusa akukho ukuphikisa. Car eliyifa esihle semigwaqo. Kodwa imizamo ukulawula umshini ezifana imoto yezemidlalo ngesivinini angaholela ekudumazekeni uwohloka descriptiveness ayo, kakhulu kunciphisa ukuzinza ohlangothini, petrol inyuka kakhulu.
Ngesikhathi esifanayo 2013. izimfanelo off-road Suzuki Grand Vitara ezingeni ukuphakama, futhi lihambisana okusezingeni eliphezulu induduzo unhlangothi. Ngaphandle okungenhla yokudlulisela impahla (ilokhi isikhungo umehluko futhi ukutholakala downshift), imoto has a-isixhumanisi ezinhlanu ezimele ezingemuva ukumiswa kanye McPherson - phambi umbono. Nokho, ababekade nemiphumela ethile engathandeki off-road endaweni: abampofu esiphambanweni weJiyomethri, ngenxa eside isiketi phambi bumper, ushaye uhlelo ngokucijile qeda, kanye icala yokudlulisa.
Suzuki Grand Vitara 2013. ngaphakathi gumbi ejabulisa izibuyekezo yezimonyo: obathuthuka plastic dash nensimbi yomculo iphaneli, umhlobiso izinto, lesikhumba zokwenziwa yemvelo touch, futhi, kuye kwaba ngcono. Stylish kudeshibhodi uyabukeka emehlweni futhi ukhululekile phambi kwesihlalo - emuva. Esikhathini irowu lezihlalo yesibili izinguquko imperceptible kanye amavolumu wahlala umthwalo zinjalo.
New Suzuki Grand Vitara-2013 ifakwe ezimbili kuphela izinhlobo zikaphethiloli izinjini. Okuningi ngokunembile, nobathathu, kodwa lezi zinhlobo ezimbili emzimbeni emithathu umnyango: 1.6 amalitha no 2.4 amalitha; futhi izinhlobo ezimbili zezinkantolo phezu komzimba ngendlu ezinhlanu, 2.0 litre kanye 2.4 litre. Inani eRussia uyahluka okufushane silula - ruble 895 000 futhi kakhulu 'eziphambili "- ruble ayizigidi ezingu 1,305.
Suzuki Grand Vitara - umshini, okuyothi ungakwazi bayakhohlwa iselula, kwenzekani uhambo ukudoba (ukubangela ugandaganda akudingeki). Futhi ukudoba indawo ukushayela ngempela iphumelele ngumoya!
Apple Uphaya apula kuhhavini. Recipe kanye Ukukhonza
I-Kyrgizstan Airlines ("Kyrgyz Airlines"): incazelo yenkampani yenethiwekhi
Kuphi ebusika, noma lapho ku-efudumele KaNcibijane?